နွေရာသီ ဗီဒိုထဲမှာရှိသင့်တဲ့ အ၀တ်အစားများ
11 Apr 2019 . 12:30 PM
နွေရာသီပူလောင်လွန်းလို့ ဘာဝတ်လို့ ၀တ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်မလား။ အခု နွေရာသီရဲ့ ဗီဒိုထဲမှာ ထည့်ထားရမယ့် အ၀တ်အစားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ အဲဒီ့အ၀တ်အစားတွေက စတိုင်မိုက်ရမယ်၊ ဖက်ရှင်ကျရမယ် ပြီးတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး အေးရမယ်။ ဒီတော့ ဘာတွေဝတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ အကြံပေးမယ်နော်။
ဒီအချိန်မှာ ဘောင်းဘီတိုဝတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘောင်းဘီတိုကလည်း မ၀တ်တတ်ရင် ပူပြီး ချွေးထွက်ပါတယ်။ ဒီတော့ စတိုင်ဘောင်းဘီပွပွလေးကို အတိုလေးရွေးဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့အပြင် အေးအေးလူလူရှိပါတယ်။
ဒီအချိန်အခါက အရင်တုန်းကလို Shoe ကြီးစီးပြီး ယောင်နေဖို့ မသင့်တော်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ခြေဖ၀ါးလေးကို သန့်ရှင်းအောင် ထားပြီး ခြေသည်းနီဆိုးထားပါ။ ပြီးရင် ခြေညှပ်ဖိနပ်လှလှလေးတွေ စီးပါ။ ဒါပဲပေါ့နော်။
အင်္ကျီကိုမှ လက်ရှည်တွေ၊ လက်တိုတွေ ၀ဲလိုက်ပြီး လက်ပြတ်အင်္ကျီကို ရွေးချယ်ပါလို့။ လက်ပြတ်အင်္ကျီဆိုတာ ကြိုးတစ်လုံးကို ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ လက်အတိပြတ်ပြီး အမြင်မရိုင်းတဲ့ လက်ပြတ်အင်္ကျီကို ပြောတာပါ။
တစ်ခါတလေ အပေါ်ထပ် မထပ်မဖြစ် ထပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ နေအရမ်းပူရင်လည်း လက်ရှည်ဝတ်သင့်သလို၊ လေအရမ်းတိုက်ရင်လည်း အသားအရေ မပျက်စီးဖို့ လက်ရှည်ဝတ်သင့်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ အပေါ်ထပ်ကို အနွေးထည်တွေမဟုတ်ဘဲ အပေါ်ထပ် ပါးပါးလွင့်လွင့်လေးတွေ ၀ယ်ယူဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ကဲ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ဂါဝန်တွေကတော့ မရှိမဖြစ်ပါနော်။ ဘောင်းဘီတွေ မကပ်နိုင်လောက်အောင် ပူတဲ့အချိန်မှာ ချည်သားဂါဝန်လေးတွေက အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတော့ နွေရာသီရဲ့ ဗီဒိုထဲမှာ မရှိမဖြစ် ထည့်ထားရမယ့် အ၀တ်အစားအမျိုးအစားတွေပါပဲနော်။ ဒီ (၅) မျိုး မရှိဘဲနဲ့ နွေရာသီကို ဖြတ်သန်းဖို့ စဉ်းစားတာ တကယ်မိုက်မဲပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာလုပ်မှာလဲ။ ကြည့်မနေနဲ့တော့။ အခုသွားဝယ်ကြရအောင်နော်။
ဖုန်းတွေမရှိခင်က တို့တွေဘယ်လိုကစားခဲ့ကြလဲ ပြန်တမ်းတကြည့်ရင်
by Naw Hsel Hte .3hours ago
မင်းသားချော James Franco အကြောင်း လူသိနည်းသေးတဲ့ အချက်များ
by yoelu .5hours ago
ဒီတစ်ပတ်အတွက် Comfort Zone ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အဖြေများစုစည်းမှု
by Htet Htet .6hours ago
Billie Eilish ပရိသတ်တိုင်း ကြိုက်တဲ့ Billie ရဲ့ လက်ရာမြောက်သီချင်းများ
by Naw Hsel Hte .7hours ago
အရမ်းပူလွန်းတဲ့ဒီနွေမှာ အပြင်သွားရင် ဘာတွေဆောင်ပြီး ဘာတွေရှောင်မလဲ
by Naw Hsel Hte . 11 hours ago
မုတ်ဆိတ်ရိတ်လိုက်တဲ့ Jason Momoa ကြောင့် အံ့သြနေတဲ့ ပရိသတ်များ